प्राधिकरण भनेको के हो? | Martech Zone
प्राधिकरण भनेको के हो?
सोमबार, डिसेम्बर 29, 2008 शनिबार, अप्रिल 30, 2016 Douglas Karr
यदि तपाईं केहि खोजी गर्नुहुन्छ को प्रमुख साइटहरू घोषणा गर्दै ट्विटरको प्राधिकरण बहस, तपाईं मेरो बहुमत टिप्पणी मा बनाइएको पाउनुहुनेछ। यसले मलाई नट ड्राइभ गरिरहेको छ कि सबै राख्छ यसको बारेमा कुरा गर्दै - र कसैले गए पनि बनायो ट्विटरिटी र Twithority.
अझ राम्रो नाम हुने थियो अनुयायीहरूको स by्ख्या अनुसार डिसेन्डि Order अर्डरमा ट्वीट्स खोज्नुहोस्.
मलाई थाहा छ, त्यो एकदम लामो नाम हो, तर यो वास्तवमै यो हो। होइन प्राधिकरण.
प्राधिकरण को परिभाषा
एक व्यक्ति वा संगठन एक विशेष, सामान्यतया राजनीतिक वा प्रशासनिक, क्षेत्र मा शक्ति वा नियन्त्रण संग।
कसैलाई प्राप्त गर्न को लागी प्राधिकरण इन्टरनेटमा वा बन्द, यसको लागि केहि चीज चाहिन्छ:
विशेषज्ञताको क्षेत्रमा ज्ञान वा अभ्यासको एक मूर्त, प्रमाणित इतिहास।
प्राधिकरणको साथ अन्यले त्यो विशेषज्ञताको एक स्वीकृति।
यी क्रमबद्ध ईन्जिनहरू ट्विटर को लागी दुबै को अभाव छ। जब म बारेमा ट्वीट Valkyrie केहि दिन अगाडि, मैले 3,200,,२०० अनुयायीहरूको साथ परिणाममा पप अप गर्ने छु। क्रिस पिरिलोको वाल्कीरीमा ट्वीट # 1 आज परिणाममा छ - किनभने उसको २,24,000,००० अनुयायीहरू:
म क्रिस पिरिल्लोलाई माया गर्दछु, तर समीक्षामा उनीसँग अख्तियारको चाट छैन (माफ गर्नुहोस् क्रिस!) Valkyrie.
पनी उनीहरूसँग केवल १,1,872 followers२ अनुयायीहरू छन्, यो भन्नको लागि यो अझ धेरै सटीक हुन सक्छ न्यूयोर्क टाइम्स चलचित्र ट्विटर, बाट NY टाइम्स चलचित्र पृष्ठ, मसँग क्रिस वा परिणामहरूमा अरु कोही पनि भन्दा अधिक अधिकार छ। र न्यूयोर्क टाइम्स ट्विटर खातासँग अनुयायीहरूको अंश छ।
मलाई लाग्छ सामाजिक मिडियामा अधिकारको लागि ठाउँ छ। म विश्वास गर्छु गुगलको पेजरैंक एल्गोरिथ्म राम्रो सुरुवात हुन सक्छ। एक ट्विटर अनुप्रयोग रिट्वीट, ट्वीट्सको रिसेन्सी, ट्वीटको आवृत्ति र अनुयायीहरूको संख्या अनुगमन गर्दछ उनीहरुको अधिकार र सम्बन्ध) विशेषज्ञताको एक क्षेत्र मा शानदार हुनेछ! म त्यहाँ बाहिर राम्रो व्यापार ब्लगिंग twitterers को लागी खोज गर्न सक्षम हुन चाहन्छु!
प्राधिकरण भनेको केवल कति व्यक्तिले तपाईंलाई पछ्याउँदैनन्। प्राधिकरण भनेको कति व्यक्तिले तपाईलाई विशेषज्ञताको विशेष क्षेत्रमा आदर गर्छन्।
टैग: अख्तियारक्रिस पिरिलोगुगल पेजर्यांकगुगल पेजर्यांक एल्गोरिथ्मचलचित्रनयाँ यर्क समयन्यू योर्क टाइम्स चलचित्रहरूनयाँ समयpagerankपृष्ठरk्क एल्गोरिथ्मtwithorityट्विटरिटीवाल्कीरी
मेरो छ शब्द पुन: शुरू
डिसे 30, 2008 मा 10: 59 AM
डग, यो थकित, राम्रो पहनाइएको, पुरानो तर्कमा केहि विवेक थप्न को लागी धन्यवाद।
छलफलमा सामान्य ज्ञानको परिचय दिन हामीसँग ती "कम" अधिकार भएका मानिसहरूलाई किन लिन्छ।
जहाँसम्म, यदि त्यहाँ चाँदीको अस्तर छ, यो हुनसक्छ, एक पटक र सबैको लागि, हामी यस तर्कलाई आराममा राख्न सक्दछौं, यद्यपि ममा निराशवादीले शंका गर्दछ कि यो दुर्भाग्यवश हुनेछ।
उत्कृष्ट पोष्ट म मेरो २2800०० अनुयायीहरूलाई ट्वीट गर्दै छु! हामी ए-लिस्टरहरू देखाउने छौं (विश्वास गर्न सक्दिन मैले त्यसो भनेको मात्र हो) जोसँग अधिकार छ! 🙂
डिसे 30, 2008 मा 11: 19 AM
आवाजको कोरसमा सामेल हुनुभएकोमा धन्यवाद धन्यबाद यो के हो वास्तवमा लाटो विचार हो।
म अनुयायीहरूको संख्या द्वारा खोजी फिल्टर गर्न सक्षम हुनुको मान देख्दछु, तर यसलाई अधिकार भन्न कल हालतमा बेकार छ।
यस प्रणालीको वकालत गर्ने मान्छेहरूको खगोलीय अनुयायी गणना (लोइक, स्कोबल, अरिंग्टन, आदि) छ। यो सुविधालाई के हो भनेर किन भन्नुहुन्न: "मलाई मेरो महत्त्वपूर्ण साथीहरू र मेरो ध्यान योग्यको मान्छे मान्छेहरू द्वारा ट्वीटहरू देखाउनुहोस्।"